Date My Pet » 10 Fomba Create A Bodacious Bachelorette Pad!
"Tsy misy toerana tahaka an-trano."—Magicien d'Oz
Na mampiaraka an-tserasera, lavitra, na dia mangingina revo eo amin'ny toerana olon-tiany, ny taty aoriana ny "faritra" ho an'ny tantaram-pitiavana amin'ny sitraponao ny toerana.
Ary tahaka izany, na tsy, ny trano, an-trano, na shack, Hoy be dia be mikasika ny hoe iza ianao sy ny maha-. Tahaka ny fitafiana, dia mampita boky momba ny toetra sy ny fomba fiainany.
Inona no momba anao ny anao?
Raha te anao mba hilaza ny fanambadiana ara-nofo ianao, na kely eo ny olona iray mendrika ny mihantona avy amin'ny sy miezaka hahafantatra tsara kokoa, Diniho ireo soso-kevitra ara-potoana.
Decorating DO NY SY DON'TS
1. Dia manao ny toerana tsy manam-paharoa, mahaliana taratry ny hoe iza ianao.
Na izany hafakely, lany andro, na sahy sy bodacious, mametraka ny manao kofehy ireny ny eo amboniny.
Izany ny hatsaran-tarehy ny manana toerana manokana: ny toerana, ho tia!
Jereo izay azonao tonga amin'ny. Andramo natambatra loko isan-karazany, fomba, textures, ary na dia ny vanim-potoana. Ao amin'ny dingana voalohany, tsy vola vola be ianao mandra antoka ny zavatra tiany ny toetra sy ny fomba fiainany.
3. Diniho ny psikolojia ny loko.
Fantatrao ve fa hues sasany hanan-kery eo ny fihetseham-ponao, ary mieritreritra ao amin'ny efitra na toerana manokana? Ohatra, beige sy ny tany feo loko no nampitony; raha toy ny loko mena sy ny volomboasary no tanjaka. Orinasa mampiasa ny loko fitsaboana amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny famokarana irina sasany valin-. Tokony koa.
4. Ataovy tsara ny faritra sy milamina.
Ny mamako dia marina. Tsy vitan'ny no fanao izany mandray anjara amin'ny famoronana vokany tsara amin'ny ankizilahy na ankizivavy, dia mandeha lavitra amin'ny fotoana hamonjena anao sy ny vola.
5. "Bloom izay nambolena ianao."
Nitondra an-trano kely ny zavaboary manan-tsaina foana hetsika. Zavamaniry hamoronana tontolo ny hafanana sy ny fampiononana. Manampy koa izy ireo mba hanome rivotra tsara toetra. Na dia tsy teraka tamin'ny "maitso ankihibe,"Misy zava-maniry isan-karazany izay mitaky tsy" fisehoana ankapobe "noho ny biby fiompy. Clueless? Google "mora mitsaha-mitombo ny zavamaniry", na mitsidika ny eo an-toerana ny Garden Home Depot departemanta vonjy.
6. Diniho ny versatility ny harona.
Tiako harona! Koa tianareo. Ry zareo lafo, tsara tarehy, ary mora ny nahita.
Hampiasa izany ny fitehirizana: mba hihazona biby kilalao, towels, CD, flavored teas, na toy ny haingon-trano farantsa zavakanto napetraka stratejika amin'ny rindrina. Afangaroy ary tsy misy loko isan-karazany, habe sy ny fomba ho ambony indrindra manenona fiantraikany.
7. Manodidina azy ny zavatra tianao.
Ianao raha tia mozika, mety ho gitara na amponga. Mety ho tsara tarehy, haingon-trano zana-kazo fa "trano" sary ny fianakavianao na ny biby fiompy. Raha tia ny mandeha, angamba afaka maneho sary ny toerana lasa lavitra sy ny tany na roa. Manampy izany, ny sasany scented labozia, na ny filaminana loharano, fa ny tsara mikasika fahavitany.
8. Aza tsinontsinoavina ny efitrano fandriana sy lakozia.
Izany izay mpivady maro mandany be ny fotoana fizarana sakafo, mahafinaritra, ary ny famoronana fahatsiarovana maharitra.
9. Miantsena amin'ny iray karazany ny toerana tsara indrindra ho an'ny fifanarahana.
Afaka baolina zavatra lehibe sasany ao amin'ny toerana tahaka ny eo an-toerana Dollar Family, kalitao Thrift toeram-pivarotana, toetrany varotra sy ny parasy tsena, ary na dia Craigslist.
10. Aza adino ny handray aloha sy aorian'ny sary.
Izany 'dia hanome anao fahatsapana lehibe nahavita zavatra sy ny fahafinaretana, ary ny hevitra mahasoa ho an'ny ho avy enhancements.
Amin'ny lohataona ny fanadiovana eny amin'ny faravodilanitra, tsy misy fotoana tsara kokoa sy tsara tarehy hanadio ambony ny toerana!